Nihotsaka ny rindrina mpiaro ny tamboho ary avy hatrany dia tao amin’ny efitrano izay nisy azy efa-mianaka. Maty tsy tsa-drano avokoa ireo. Ny loza faharoa indray dia olona latsaka tao anaty lava-drano. Efa maty izy tamin’ny fotoana nahatongavan’ny mpamonjy voina teny an-toerana. Ilay mpanavotra azy kosa, lehilahy 45 taona, mba avotra ihany ny ainy.
ZANA-KISOA NO NAFARANA, ALIKA NO TONGA
Nisy nivarotra alika tamin’ny kaomandy amin’ny facebook. Zana-kisoa malemy taolana no nafarana kinanjo alika efa mendy tsara no tonga tao an-trano. Efa teo ambony latabatra vao nahatsikaritra ny mpividy ary nanao antso avo ny olona mba ho mailo. Ny laharan’ny finday efa tsy nandeha intsony nanomboka teo. Fetsy ratsy ny olona ary tena lasa famosaviana indraindray ny fitaka atao amin’ny tambajotra sosialy.
TANY INDE NO BE ZAZA TERAKA INDRINDRA
Nahatratra 2087 ny zaza izay teraka tamin’ny taom-baovao teto Madagasikara, raha araka ny fanazavan’ny Unicef. Raha oharina amin’ny fiterahana maneran-tany tamin’io andro io dia tafiakatra 0,53 % izany satria manodidina ny 392.000 ny fiterahana teto ambonin’ny tany. Tany Inde no voalohany indrindra, Chine ny faharoa ary Nigéria kosa ny firenena afrikana nitàna ny laharana voalohany tamin’ny fiterahana tamin’ny taom-baovao.
FIARA NIKODIADIA TANY ANATY HANTSANA
Manerinerina, ny taom-baovao teo. Fiara tsy mataho-dàlana iray mitondra ny marika Kia no nivoaka ny làlana ary nivadika tany anaty hantsana. Dimy naratra tao anatin’ny fiara ary nisy ankizy telo tamin’izany. Fandehanana mafy no nitarika io lozam-pifamoivoizana io ary hiakatra aty an-drenivohitra ny dian’ity fianakaviana ity. Mba tsy nisy namoy ny aina na dia mafy aza ny fitrangan’ilay loza.
FIARA ROA NIREHITRA TENY AMIN’NY BY PASS
Grand Starex roa, Matiz iray ary Kia iray no indray nirehitra tao amin’ny garazy iray tetsy By-pass omaly. Raha tsy tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina dia tsy voafehy mihitsy ny afo. Miisa 11 ireo olona izay nifanampy tamin’ny famonoana ny afo ary nitondra kamiao mpitondra rano miisa roa izay ireo. Vao maraina no nitranga ity loza ity ary tsy mbola voafaritra hatreto ny nitarika ny firehetana.
Tao Toamasina no isan’ny betsaka indrindra ny basy izay nogiazana tamin’iny taon-dasa teo iny. Nahatratra 20 isa izany ka ny efatra tamin’ireo dia basy maherivaika Kalachnikov. Maro tamin’ireo azon’ny polisy koa no vita gasy ary nahatratra an-jatony maro ny bala niaraka tamin’ireo. Tao an-toerana rahateo no isan’ny nampitaraina ny maro ny fanafihana mitam-piadiana tamin’iny taona iny. Betsaka ireo izay namoy ny aina ary nisy hatramin’ny polisy aza, rehefa notifirin’ny jiolahy.
FANAMBOARANA NY KIANJABEN’I MAHAMASINA
Amin'ny herinandro no manomboka ny asa fanamboarana ny kianjan 'ny Mahamasina. Ny fandrodanana ny « tribune centrale » no hanombohana izany. Asa anefa raha mahatratra ny lalaon'i Barea amin'ny marsa ny hahavitan’ity kianja ity satria izay no tena isan’ny lehibe indrindra amin’ny fanamboarana azy. Miandrandra ny rehetra, indrindra ny mpitia baolina kitra, mba tsy ho foto-drafitrasa izay mijanona fotsiny eo amin’ny 3D indray no mitranga, toa izay efa fahita matetika.